नेप्से परिसूचक १०४ अंकले बढ्यो, कुन उपसूचकको कति ? | Deshdut
काठमाडौं : सेयर बजार मापक परिसूचक नेप्से १०४.८८ अंकले बढेको छ। हिजो २७१२.०७ अंकमा कारोबार सकिएको नेप्से आज (बुधबार) बढेर २८१६.९५ अंक पुगेको हो।
साताको कारोबारको चौथो दिन (आज) सेयर बजारका सबै उपसूचक बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
आज २ सय १७ कम्पनीको ६ अर्ब १७ करोड ९३ लाख १ सय ५८ रूपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। जसमा १ करोड २१ लाख २२ हजार २ सय ९८ सेयरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
कुन उपसूचकको कति बढ्यो ?
सबैभन्दा बढी जीवन बिमा उपसूचक ५५१.७५ अंक बढेको छ। त्यसपछि निर्जीवन बिमा ४४१.८७, विकास बैंक ३८१.४२, वित्त २०७.९३, उत्पादन १८२.३१, माइक्रोफाइनान्स १७०.७३, जलविद्युत १६९.४४, होटल तथा पर्यटन १३६.९ र व्यापार १३२.६७ अंकले बढेका छन्।
यस्तै, बैंकिङ ६०.९२, अन्य ४१.७३, लगानी ३.८९ र म्युचल फन्ड उपसूचक ०.२२ अंकले बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।